Iimpundu Amabele amakhulu Oonodoli be-UR bokwenyani 153cm umzimba omile okwe-S unodoli wesondo oshibhileyo uAshlyn
UAshlyn Owasetyhini omncinci otyebileyo othanda unodoli uyathengiswa Amabele amakhulu Iimpundu TPE 153cm Iinwele ezinde ezigobileyo Amehlo angwevu-luhlaza Umzimba obungwe ngu-S
Iinkcukacha zikanodoli ngesondo:
- Ububanzi bamagxa: 36CM
- Ukuphakama okusezantsi: 50CM
- Ingxaki: 88CM
- Isinqe: 46CM
- Ukuphakama: 88CM
- Ubude bomlenze wangaphakathi: 76CM
- Ubude beenyawo: 21CM
- Ubunzima bomnatha: 34KG
- Ukupakisha ubunzima: 40KG
- Umgudu: 16CM
- Ubungakanani bokupakisha: 140 * 42 * 30CM
Imbali yemvelaphi ka-Ashlyn:
U-Ashlyn unodoli wesondo we-TPE ubude be-153cm. Ubuhle obuphambi kwam benza intliziyo yam yashukuma, kwaye andizange ndikwazi ukuzibamba. Iidoli ze-UR ngokuqinileyo ezingalweni zam kwakhona. Ndawola ivumba elifudumeleyo le-nephrite ezingalweni zam, ngelixa ndiphuza iinwele ezithambileyo ezinuka kamnandi zikanodoli wesini, ngelixa ndisenza unodoli wokwenyani atyebe kwaye aqine. Amabele akhe ebecinezele esifubeni sam, ngeloxesha ndaqala ndacinezela ngenkani kwisisu sikanodoli esithe tyaba esithambileyo ngokurhalela ukwanda kwendoda.
Ivory Cool Okwenyanisayo Uthando unodoli Big Breast Sunshine iModeli yabasetyhini ...
Imbali yemvelaphi ye-Ivory: I-Ivory iyidoli ye-Silicone yesondo enobude be-170cm. Abazange bandiqaphele ngenxa yokuba imoto yayihamba ngokukhawuleza, kwaye ndandi ... ndiphazamisekile emoyeni. Ukusuka kwiingxoxo zebrats ezincinci, ndafunda ukuba isizathu sokuba oonodoli bezesondo bexakeke kakhulu kwiminyaka yamuva nje akaboni ...
Iinyawo zika-Ivanna Slim jade zothando unodoli webele Enkulu i-E-cup yamabele aqinileyo Pl ...
Imbali yemvelaphi ka-Ivanna: U-Ivanna yi-Platinum Silicone (PS) idoli yesondo enobude be-170cm. Xa ebona ukuba i-doll yesondo ayizange ikhutshwe, weza ngaphaya, wayidonsa idoli yangempela kwigumbi, wayicinezela phantsi kwebhedi. , kwaye wahluba iimpahla zikanodoli wothando phantsi, kwaye wakhulula ngokukhawuleza isini do ...
UNalani Brown weNwele eziMfutshane zePlatinum Silicone unodoli wesondo we-E-Cup Volleyb ...
Ibali lemvelaphi kaNalani: I-Nalani yi-Platinum Silicone (PS) idoli yesondo kunye nobude be-170cm. Emva koko, bafafaza i-powder yonyango kwi-fat, i-leech evuvukileyo, kunye nomzimba ombi we-leech wakhawuleza kwaye watshiza into ethile kwiso lehashe; kwakubonakala ngathi eyona nto babeyithathile kwi ...
I-Lennox I-sofa yegumbi lokulala enikezelweyo ngoDoli wothando oMnandi Ubuhle beenwele ezimfutshane ...
Ibali lemvelaphi ye-Lennox: I-Lennox iyidoli yesondo ye-TPE enobude be-163cm.Nangona kunjalo, kwakungekho nodoli wesondo, wavele wakhupha ngokukhawuleza kwaye ubuso bakhe buhlutha kancane; umzimba wakhe wahlala ungashukumi, evumela iileetshi ezimbini ezincangathi ukuba ziphume kancinane kwiingono zakhe, zizitsale zikhuphe isentimitha enye ngesentimitha enye ...
Henley Charming imodeli umzimba Oonodoli Bomi ngokwesondo Inkosi ebekekileyo ...
Imbali yemvelaphi ye-Henley: U-Henley unodoli we-TPE wesondo kunye nobude be-166cm.Ukususela kwiimpawu ezifihlakeleyo ebusweni buka-Ai Doll, ndinokuxelela ukuba idoli yangempela iyonwabela le nkqubo ... Thixo wam, umntu unokuyonwabela njani le nkqubo! Igazi lam, i-essence yam, yathathwa ngamanqatha ama-6 ...
USasha Slim esinqeni unodoli wokwenyani uyathengiswa iG-Cup enombala weTomato se ...
Ibali lemvelaphi kaSasha: U-Sasha unodoli wesondo we-TPE kunye nobude be-158 cm.Izandla zedoli zangempela azinelisekanga ngokuchukumisa iibhuthi. Izandla zakhe ezincinci ezithambileyo sele zikhulule ibhulukhwe kanodoli wothando kwaye ziyihlisele phantsi ibhulukhwe kanodoli wothando. Kupholile, iminwe yakhe ngokukhawuleza yachukumisa ...
UAdrianna Okwenyani labia ngesondo unodoli omde ophotheneyo ngeenwele ezimnyama TP ...
Ibali lemvelaphi ka-Adrianna: U-Adrianna unodoli wesondo we-TPE kunye nobude be-88cm. I-penis enkulu yatshitshisa amaxesha alikhulu kwiidoli zesondo ezincinci emlonyeni omncinci, kwaye ngokukhawuleza isisu sam saba shushu, kwaye kwakukho umnqweno omkhulu owandenza ukuba ndifune. khupha ubudoda. Ndazicingela ndathi: “Ayilunganga le nto, ndiza...
UKarina ongathinteliyo unodoli wesondo onjengobomi be-H-Cup Iinwele ezinde ezigobileyo ze-TPE ...
Ibali lemvelaphi yaseKarina: UKarina unodoli wesondo we-TPE ubude be-162cm.Izandla ezincinci kunye ezibhityileyo zabamba isifuba esomeleleyo soonodoli besini esincinci, kwaye iminwe yatyhutyha ngobunono emzimbeni wedoli yesini. Yayirhawuzelelwa kancinci, ikrwada, kwaye itofotofo kakhulu. ndatyhala ngapha nangapha ngolu hlobo...
Julie Ubomi bokwenyani replica mzuzu iSex unodoli wezihlunu imodeli TPE 150CM B ...
Imbali yemvelaphi kaJulie: UJulie ngunodoli wesondo we-TPE nobude be-150cm. Ndaqalisa ukukhotha incanca kanodoli, andazi noba yilento yonke imovements ibinamandla namhlanje, ndawuva unodoli weSex umanzi kunesiqhelo...ndaqala ndafaka iminwe yam yonke engquzeni yakhe. Lo...
ICarly Yellow iinwele ezinde eziphotheneyo iTpe Isini unodoli H-Cup Whip queen TPE 1 ...
Ibali lemvelaphi yeCarly: I-Carly iyidoli yesondo ye-TPE enobude be-158cm. Oonodoli besondo bexabiso eliphantsi baqengqeleka bekukhotha emva naphambili okwexeshana, bavula umlomo wakhe, ndacotha ndafaka i-faucet yam emlonyeni wakhe wecherry, ndaziva ndigudile, ndihlaziyekile, ndichulumancisa. Ndazolula izandla zam ndingazi...